Ihowuliseleli yobuGcisa ngedyasi emide yeConditioner enoMvelisi oGqwesileyo wokuSebenza kunye noMboneleli |I-Skylark
Ifowuni: +86 18908183680
IPowder yokuBilisa ngeKlorini yobuNgcali ngokuSebenza ngokuPhakamileyo...
Isinxibo esiFanelekileyo siDidilisha ngePe...
Isixhobo sokuthambisa sasekhitshini esisebenza kakuhle kakhulu esineNtsebenzo eGqwesileyo
Ubuchwephesha be-Bio-enzyme ye-Deodorizer yokutshiza ngokuPhila kwezilwanyana E...
I-Pet De-Greaser yobuNgcali Ngomsebenzi oGqwesileyo
Ubuchwephesha bedyasi emide yeSilwatyo seConditioner Ngomsebenzi oGqwesileyo
Imveliso inokuhlanjululwa ngokucokisekileyo intsalela kwaye ingene kwi-epidermis, iphucule ukudibanisa okugudileyo kunye nokomileyo, kunye nokuphucula umphumo wokunyusa iinwele.
Ehlabathini lonkeumthengisi, umthengisikwayeumenziyokucoca izilwanyana zasekhaya kunye neemveliso zokhathalelo.Sinokuvelisa iimveliso zeLogo yakho ngokweemfuno zakho.Sigxininisa ekuboneleleni ngokufanelekileyo, ngokusingqongileyo, umgangatho ophezulu, iimveliso ezigxininisiweyo.
Nayiphi na imibuzo siyavuya ukuyiphendula, pls thumela imibuzo yakho kunye nemiyalelo.
Isampulu yesitokhwe siMahala kwaye siyafumaneka
Idyasi endeI-Pet Conditioner
Naziphi na iintlobo zeekati kunye nezinja ezinedyasi emide
Ukuhlamba iikati ezinedyasi ezinde kunye nezinja zalo naluphi na uhlobo.
I-OEM/ODM, iWholeyili, iRetail
Ivumba, Ukuchazwa, Umbala, Isingxobo, Ukupakishwa
NJENGOKO KUCETYIWE YIPRO
I-BOURENA Long Coat Pet Conditioner yimveliso egqwesileyo "ye-pet-centric" eyanelisa imigangatho ye-EU ngaphandle kwemibala, ioli ye-silicon.Imveliso inokuhlanjululwa ngokucokisekileyo intsalela kwaye ingene kwi-epidermis, iphucule ukuhambelana okugudileyo kunye nokomileyo ngaphandle kokuthambisa iinwele zesilwanyana., Eyandisa umgangatho weenwele zesilwanyana.Ngelo xesha, ingena kwi-corneum ye-stratum ukulungisa iintanda zangaphakathi kunye nokuphucula umphumo wokunyusa iinwele.
1. I-BOURENA pet conditioner kufuneka isetyenziswe emva kokusebenzisa i-BOURENA ishampu yesilwanyana okanye ezinye iishampu zesilwanyana.
2. Nciphisa i-conditioner kunye namanzi ngomlinganiselo we-1: 8 kwi-milkshake, uthele entendeni yesandla sakho.
3. Faka i-diluent ngqo kwizinwele kwaye uyisebenzise kwizinwele ngeminwe yakho imizuzu emi-3.
4. Hlanza ngamanzi ashushu ukususa intsalela yeshampu.
5. Yomisa iinwele zakho kunye nesitayela ngendlela eqhelekileyo.
Le mveliso iyacetyiswa ukuba isetyenziswe kunye ne-BOURENA i-shampoo yesilwanyana esihambelana nobude beenwele kunye nombala weenwele zesiphumo esingcono.
● Nceda ucoce ngokupheleleyo iinwele zesilo-qabane xa uhlamba ukuze uthintele isilo-qabane sikhothe intsalela okanye sidibane namehlo.Ukukhotha okugqithileyo kwentsalela kunokubangela ukucaphuka kwendlela yokwetyisa kwaye kubangele ukubuyisela okomileyo kwesilwanyana sasekhaya.
● Kusetyenziso lwangaphandle kuphela.
Q: Ndinganalo uyilo lwam olulungiselelweyo lwemveliso kunye nokupakishwa?
A: Ewe, ingaba i-OEM njengeemfuno zakho.Vele usinike umzobo oyilelwe thina.
Umbuzo: Ndingazifumana njani iisampuli?
A: Unokubonelela ngeesampulu zasimahla zovavanyo ngaphambi kokuodola, vele uhlawule iindleko zekhuriya.
Q: Ithini imiqathango yentlawulo?
A: 30% T / T idiphozithi, 70% T / T ibhalansi intlawulo phambi kokuthunyelwa.
Q: Wenza njani umzi-mveliso wakho malunga nolawulo lomgangatho?
A: Sinomgaqo ongqongqoulawulo lwemekoinkqubo, kunye neengcali zethu zobuchwephesha ziya kujonga inkangeleko kunye novavanyo lwemisebenzi yazo zonke izinto zethu ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngaphambili: IConditioner yoBuchule obuMfutshane yeMbasa yeSilwanyana Ngomsebenzi oGqwesileyo
Okulandelayo: I-Arhente yeMibhobho esebenza kakhulu ngokuSebenza okuGqwesileyo
Okwangoku, inkampani ikhulisa ngamandla iimarike zaphesheya kunye nokwakheka kwehlabathi.Kule minyaka mithathu izayo, sizibophelele ekubeni lelinye lawona mashishini aphezulu alishumi athumela ngaphandle kwishishini lemichiza lemihla ngemihla laseTshayina, ukukhonza ihlabathi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokuzuza imeko yokuphumelela kubathengi abaninzi.
Imveliso yezilwanyana zasekhaya
Ubonelelo ngezilwanyana zasekhaya
Idyasi yoBuchule beSilo-qabane esiSmooth uLiquid Egqwesileyo...
Idyasi emfutshane yoBuchule beShampoo yeSilo sasekhaya Egqwesileyo...
Ubuchwephesha bedyasi ende yeShampoo yeSilo sasekhaya Egqwesileyo...
IConditioner yoBuchule obuMfutshane yedyasi yesilwanyane esine Ex...
Ugwebu lobuGcisa lokucoca unyawo lwesilo-qabane ngoKugqwesa...